နူမိုကောကယ်ကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
နူမိုကောကယ်ကာကွယ်ဆေးများ (အင်္ဂလိပ်: Pneumococcal vaccine)သည် စထရပ်တိုကောကပ်စ် နူမိုနီရေး Streptococcus pneumoniae (English)ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးများသည် အဆုတ်ရောင်ခြင်း (pneumonia)၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း (meningitis)နှင့် ပိုးမွှားများတကိုယ်လုံးတွင်ပျံ့နှံ့ကာ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း(sepsis)တို့မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ရောဂါပိုး၏ပဋိဇာတ်နှင့် သယ်ဆောင်ပေးသောပရိုတိန်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ကွန်ဂျုဂိတ်ကာကွယ်ဆေး(conjugate vaccine)နှင့် ပေါ်လီစက္ကရိုက်ပဋိပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပေါ်လီစက္ကရိုက်ကာကွယ်ဆေး(polysaccharide vaccines)ဟူ၍ အမျိုးအစား (၂)မျိုးရှိသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးများကို ကြွက်သား သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်သို့ ထိုးနှံရသည်။
ကွန်ဂျုဂိတ်ကာကွယ်ဆေးကို ကလေးများအတွက် ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသူများကိုပါ ပေးသင့်သည်။ အကြိမ်ပေါင်း(၃)ကြိမ် သို့မဟုတ် (၄)ကြိမ်ထိုးပြီးပါက ပြင်းထန်သောရောဂါမဖြစ်အောင် (၇၁)မှ(၉၃)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ပေါ်လီစက္ကရိုက်ကာကွယ်ဆေးသည် ကျန်းမာနေသောလူကြီးများအတွက်သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး အသက်(၂)နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဤကာကွယ်ဆေးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်သည်။ ကွန်ဂျုဂိတ်ကာကွယ်ဆေးထိုးသော ကလေးငယ်များ(၁၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ဆေးထိုးသည့်နေရာ၌ နီရဲခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်းနှင့် အိပ်ချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ပြင်းထန်သည့် ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်လေ့မရှိပါ။ 
ပထမဆုံး နူမိုကောကယ်ကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၈၀)နှစ်ပိုင်းတွင် စတင်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (၁၇)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂၅-၁၀ဝ)ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Pneumococcal vaccines WHO position paper--2012" (Apr 6, 2012). Wkly Epidemiol Rec 87 (14): 129–44. PMID 24340399.
↑ Vaccine, Pneumococcal။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 316။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နူမိုကောကယ်ကာကွယ်ဆေး&oldid=289690" မှ ရယူရန်
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။